Tag: fanodinana fandoavam-bola | Martech Zone
Tag: fanodinana vola
Ny fampidirana dia tsy mora eo anelanelan'ny serivisy ilain'ny orinasanao kely sy ireo sehatra misy. Ho an'ny automatisation anatiny sy ny traikefa mpanjifa tsy misy tomika mba hiasa tsara dia mety tsy ho an'ny teti-bolan'ny ankamaroan'ny orinasa kely. Mila fandraharahana mivelatra amin'ny ankamaroan'ny sehatra ireo orinasa madinidinika: tranokala - tranokala madio izay nohamarinina ho an'ny fikarohana eo an-toerana. Messenger - ny fahaizana mifandray amin'ny fomba mahomby sy mora amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny vinavina. Famandrihana - fandaharam-potoana hanompoana tena miaraka amin'ny fanafoanana, fampahatsiahivana ary
SpotOn dia efa nametraka fitaovana maherin'ny 3,000 ho an'ny varotra sy fikarakarana fandoavam-bola any amin'ny trano fisakafoanana, mpivarotra ary salon manerana ny firenena. Niara-niasa tamin'i Poynt izy ireo mba hanomezana toerana fihenam-bidy amin'ny terminal fivarotana ahafahan'ny mpivarotra sy ny tompona trano fisakafoanana manangona mombamomba ny fifandraisan'ny mpanjifa ary manaiky ny fandoavam-bola amin'ny kaontera, na aiza na aiza misy ny mpanjifa. Fitaovana fivarotana POS ireo fitaovana marketing an'ny SpotOn dia manamora ny fametrahana paikady fifandraisana tsy miovaova amin'ny mpanjifanao ka matetika izy ireo
Ny fidirana tokana tokana dia voaporofo fa mandaitra manerana ny solaitrabe - na amin'ny fampiasana ny fidirana sosialy hamenoana ny takelaka fisoratana anarana, na izao amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo haitao fandoavambola mba hanovana mpanjifa haingana. Visa dia manolotra mari-pamantarana tokana amin'ny rafitra antsoina hoe Visa Checkout izay efa manana fananganana maro. Miaraka amin'ny fitomboana haingana ao anatin'ny 10 volana lasa, ny Visa Checkout dia nahita tahan'ny fananganana sy fifanakalozan-kevitra lehibe. Hanomboka fanentanana iraisana amin'ny marketing sy dokambarotra lehibe izy ireo amin'ity fahavaratra ity. Hatreto aloha,